‘दमिनी भीर’ ः समाज दर्शनको जीवन्त अभिव्यञ्जना – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘दमिनी भीर’ ः समाज दर्शनको जीवन्त अभिव्यञ्जना
२०७१ जेष्ठ २४, शनिबार ००:५० गते
‘दमिनी भीर’ राजन मुकारूङद्वारा लिखित सामाजिक उपन्यास हो । फिनिक्स बुुक्स प्रकाशन काठमाडौँबाट २०६९ सालमा प्रथम पटक प्रकाशित प्रस्तुत उपन्यासले सोही वर्षको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । यसले भोजपुरका सुदूर पहाडी इलाका तथा काठमाडौँका कोटेश्वर, खरिबोट, सिंहदरबार आदि क्षेत्रहरुलाई कार्यपीठिका बनाएको छ । खासगरी, २०५४ सालदेखि यता करिब २०६७ सम्मका राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधि यसमा प्रस्तुत छन् । नाम्देङ, लच्छी, धौले कान्छो, रम्भा, हाङ्दिमा, धितेन, दिदीभिनाजु, रामप्रसाद सुवेदी (खरिदार), वन्दना, काजीराम (हाकिम), जगरमान (जेठा राई), कर्णेल दलबहादुर थापा, भाग्यवती (आमा मर्दमानकी), मर्दमान, पर्खमान, खड्गराम, चन्द्र शमशेर, बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेश, निसाम, नवीन, कान्छीमाया, पारुमा, देउमान, चन्द्रे, काका, सोमकुमार, अमित, शोभित, चेतन, रिदम, सानी, राधा मिस, पूर्ण डोटेल, नाम्देङको घरपट्टि दिदीभिनाजु, गगन, प्रवीण राई, बौराज, रेगन, नन्दकुमार, दिनेश, भीम खवास, मिलन पाण्डे, निहाङ, कान्छा राईकी छोरी पारुमा, जैकुमार, गंगा (धौले कान्छोकी पहिलो पत्नी, जुन पहिल्यै मरिसकी जन्डिस भएर) देउगण, नरजंग (हाङ्दिमाको बाल्यकालीन पति) र उसकी पत्नी, अभया, नित्या, टाइसन दाइ (किशोर अमात्य) खुक्सङ, ज्वाला, दिलशोभा, सेखुवाली, नायम, युमा, दिलशेर आदि समाजका जीवन्त चरित्र प्रस्तुत छन् ।
व्याकरणसम्मत भाषाभन्दा जनजिब्रोमा प्रचलित तर अतिशय छोटा वाक्य, त्यसमा पनि भाषिक स्वरुपको पर्याप्त भञ्जन गरिएको यस उपन्यासमा अवभाषाको समेत प्रयोग गरिएको छ । जम्मा २८५ पृष्ठमा संरचित छ यो ।
यसमा मूल ५ खण्ड छन्, जसमध्येको पहिलो खण्ड हो ः ‘प्रगतिका लागि’, जसलाई उपन्यासकारले ‘आधारकथा नाउँ दिएका छन् । यो उपन्यासको शीर्षक ‘दमिनी भीर’ राख्नुको अन्तर्यलाई उजागर गर्नमा सफल पनि छ । दोस्रो खण्डको नाउँ हो ः ‘दमिनी भीर’ । यसमा जम्मा १७ उपखण्ड छन् । तिनलाई त्यस्तो केही उपनाउँचाहिँ दिइएको छैन, तर क्रमशः अङ्कद्वारा मात्रै उपखण्डको सूचित गरिएको छ । अर्को खण्डको नाउँ हो ः ‘मध्य कथा’ । यसका पनि २३ उपखण्ड छन् । चौँथो खण्डलाई ‘उत्तर कथा’ नाउँ दिइएको छ, जसमा आन्दोलन र यसको सुरक्षित अवतरणमै कथा केन्द्रित बनेको छ । यसमा भने जम्मा १० उपखण्डहरु छन् । यसको अन्तिम खण्डको नाउँ हो ः ‘कथान्त’ । यसलाई भने उपसंहार अंशका रुपमा लिइएको छ । पूर्वदीप्ति पद्धति (फ्ल्यासब्याक) अपनाएर लेखिएको उनको यो रचनामा चेतनप्रवाह शैलीका साथै तृतीय पुरूषीय वस्तुगत दृष्टिविन्दु उपयोग गरिएको छ । चार वर्षअघिसम्म नुन, कपडा आदि सामग्री खरिद गर्न खर्पन बोकेरै धनकुटा र धरानसम्म आइपुग्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको र २०५४ सालपछि भने यो समस्या नरहेको तथ्यलाई तुलनात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्दै आरम्भ गरिएको यस उपन्यासले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक, शैक्षिक तथा नैतिक पक्षलाई बडो मार्मिक तर स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
१) सामाजिक विसंगति ः
सामन्ती संस्कार र तज्जन्य प्रभावका कारण ग्रामीण समाजमा हुने अनैतिक यौनिक गतिविधि र यसबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई यसले सशक्त रुपमा उजागर गरेको छ । काजीले दमिनीलाई गरेको बलात्कार र यसैको प्रतिक्रियास्वरुप उसले भीरबाट हाम फालेर गरेको आत्महत्याको प्रसङ्गले यस तथ्यको पुष्टि गर्दछ–
‘घिसारे काजीले । लगे भित्र । थुने ढोका भित्रबाट । चिच्याई दमिनी तर सुनेन कसैले । बरू आँगनको घोडाचाहिँ जोडजोडले हिन्हिनायो । त्यही रात घरमाथिबाट फाल हानी दमिनीले । उसैको सम्झनामा भनिन्छ दमिनी भीर ।’
यस्तै, चेतनले लच्छीलाई गरेको बलात्कार र जिम्मेवारी नलिईकन भोलिपल्टै सहर भागेकोे घटनाले यस्ता अनैतिक गतिविधि उजागर हुन पुगेको छ । यस्तै, सहरका डान्स बारमा हुने यौनिक गतिविधि र त्यसले पारिवरिक जीवनमा पार्ने दूरगामी प्रभाव पनि मुखरित हुन पुगेको छ । गगन, नाम्देङ र रम्भाको प्रसङ्ग, प्रकाश र जगरमानको वैवाहिक जीवनपद्धति आदिले यस्ता विसङ्गतिको उद्घाटन गरेकै छ । यस्तै मद्यपान, झैझगडा, छुवाछूत र कलहहरु पनि सामाजिक विसङ्गतिका प्रतिनिधिमूलक बिम्ब बनेर आएका छन् । यस्तै, गाउँसहरमा विभिन्न कारणले बढ्दै गएको भ्रूण हत्याको तथ्य पनि यसरी प्रतीकात्मक रुपमा उजागर हुन पुगेको छ–
‘कठै ती सब मरे काठमाण्डुसँग । ती सब मरे काठमाण्डुमा जिउन खोज्दा । ती सब मरे नामर्द बाबुको मृत्युमा । ती सब मरे कमजोर आमाको निर्जीव रच्छ्यानमा । तिनको दोष थिएन । तिनको अपराध थिएन । तर, ती सब मरे सहरिया आमाबाबुको अपराधमा । मरे विज्ञान नामको सिरिन्जले घोचिएर । आधुनिकता नामको औषधिले तुहाइएर । मरे क्युरेट नामधारी सयलले चिथोरिएर । भ्रूणमै मरे सुरक्षित गर्भपतन नामको शमसान पाठेघरमा ।’
२) विद्रोही चेतना ः
प्रस्तुत उपन्यासमा सर्वाधिक रुपमा सशक्त भएर मुखरित हुन पुगेको स्वर भनेकै विद्रोही चेतना हो । राज्यले सदियौँदेखि नै गर्दै आएको उपेक्षा, विभेद र पार्दै आएको किनारीकरणको विरूद्धमा आवाज उठाउनु र आफ्नो जातीय पहिचान प्राप्तिको दिशामा कडा सङ्घर्षमा उत्रन आह्वान् गर्नु यसको मूल अभीष्ट देखिन्छ । उत्पीडित सीमान्तकृत तथा उपेक्षित जातजातिका पक्षमा अग्रसर हुन बाध्य पारिएको स्थितिलाई आप्mना शब्दमा उपन्यासकार यसरी प्रस्तुत हुन्छन्–
‘कसलाई मन छ जातीय कुरा गर्न ? कसलाई मन छ साँघुरो हुन ? तर यो राज्यले कहिले सोच्यो ? कहिले सोच्यो कहाँ–कहाँ दुखेको छ भनेर ? कहिले सोच्यो को–को उत्पीडित, सीमान्तकृत छन् भनेर ?’
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता छाडेपछि बनेको माधव नेपालको सरकारलाई कठपुतलीको संज्ञा दिँदै र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि भन्दै तत्कालीन सरकारको विरूद्धमा उत्रिएको राजधानी केन्द्रित एनेकपा माओवादीको आन्दोलनका कारण जनजीवन ज्यादै कष्टकर बन्दै गएपछि नागरिकको नाउँमा उत्रिएको बन्दविरूद्धको नारा–जुलुसप्रति लक्षित हुँदै व्यक्त मन्तव्यहरु पनि यसमा व्यक्त भएकै छन् ।
‘कमरेडहरु हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनविरूद्ध, जनआन्दोलनविरूद्ध यहाँका तथाकथित सुकिलामुकिला भरौटेहरु मुर्दाशान्तिका नाममा ¥याली निकालिरहेका छन् । हामीविरूद्ध प्रतिकार गरिरहेका छन् । भर्खरै मात्र रत्नपार्कमा भिडन्त भएको छ । त्यो ¥याली हामीतिर आइरहेको छ ।’
‘कमरेडहरु हामी क्रान्तिकारीहरु अनुशासनको कसीमा सधैँ रहनेछौँ । हामी भद्र भएर बस्नेछौँ । शालीन भएर बस्नेछौँ । हाम्रो पहिलो घेरा वाईसीएल नेपालले रेकी लाउनेछ । तेस्रो घेरामा मञ्चसम्बद्ध कमरेडहरु रहनुहुनेछ । बीचमा केन्द्रीय तथा राज्यस्तरीय नेताहरु रहनुहुनेछ । यो ब्युरोको शासन हो । सबैले पालना…।’
यसै सन्दर्भमा गुञ्जायमान भएका नारा, सुसेली र कोलाहलपूर्ण वातावरणको पनि यसरी जीवन्त तस्बिर उतारिएको छ–
‘एकाएक आर्कको मास खल्बलियो । अनगिन्ती सुसेलाहरु सुसेलिए । हसियाँ–हथौडा अंकित राता झन्डाहरु फर्फराए आकाशमा ।’ नारा लाग्यो त्यसरी नै ः
‘क्रान्तिकारी शक्ति जिन्दावाद !— जिन्दावाद ! जिन्दावाद !’
‘प्रतिक्रान्तिकारी दलालहरु मुर्दावाद !— मुर्दावाद ! मुर्दावाद !’
‘सहरिया भरौटेहरु मुर्दावाद !— मुर्दावाद !’
जातीय पहिचानका लागि सङ्घर्षरत जनजातिहरुसँग सरकारले सम्झौता गरेपछि यसलाई व्यवहारमा उतार्न भन्दै दबाब दिने उद्देश्यले आयोजित जनजातिको आन्दोलनमा भएका तोडफोड र उत्तेजित विचार र तरलतापूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोणहरु पनि यसमा सशक्त भएर यसरी प्रस्तुत भएको देखिन्छ–
तपैँको पक्ष पनि प्रचण्डकै जस्तो । सबै जनजाति मिल्ने भएपछि दाहाल भइजाने । बाहुन भइहाल्ने । हेरिराख्नुहोला, सप्पै बाहुन मिलेर संविधानसभा नै भङ्ग गर्न बेर लाउँदैन ।
तिमीहरुकै लागि हामीले पनि आन्दोलन गरेको । तिमीहरुकै लागि लडेको । अबचाहिँ हामीले नै बोल्न नपाउने ? के यो देशमा हाम्रो दिन सकियो ? कुन जङ्गली राज्य खोज्दै छौँ है साथी हो ?
३) निराशावादी जीवनदृष्टि ः
माकुने सरकारलाई ढालेर नयाँ जनवादी राज्य सत्ता स्थापित गरिने सपना बाँडेर देशैभरिबाट समेटेर राजधानी पु¥याइएका लाखौँ कार्यकर्ताहरु जब प्रतिक्रान्तिको खतरा बढ्यो, फलतः तत्काललाई आन्दोलन नै स्थगन गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब सिर्जना भयो । फलतः आन्दोलनले अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त नगर्दै आन्दोलन स्थगित गर्नुप¥यो । यसबाट राजधानीमा भेला भएका लाखौँलाख कार्यकर्ताहरुमा नेतृत्वप्रति चरम आक्रोश र वितृष्णा तथा समग्र राजनीतिप्रति नै निराशा पैदा भयो । यस स्थितिलाई उपन्यासकार सुन्दर ढङ्गमा यसरी अभिव्यक्ति दिन्छन्–
अन्तिम युद्ध भनिएको थियो, त्यही युद्ध हारेका थिए । उनीहरुको बुझाइ यही थियो । सबै उदास थिए । सबै निराश थिए । एक ढिक्का नुन भएर पग्लिरहेका थिए भित्रभित्र । खारजस्तो मनमा बेचैनी थियो । थियो, आत्मपछुतोजस्तो । थियो, सपनाको हार । थियो, नमीठो दर्द ।
४) समतामुखी चिन्तन ः
एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासन र त्यसपछिको पञ्चायतकालीन एक द्वार नीतिअनुरुप चलेको राज्य सत्ताका कारण उपेक्षित बन्न पुगेका नागरिकहरुको बाहुन तथा क्षेत्रीप्रति लक्षित आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति सन्तुलित विचार व्यक्त गर्ने जनजाति नेताहरुको प्रतिनिधिमूलक दृष्टिकोण यसमा यसरी मुखरित हुन पुगेको छ–
‘के हो अङ्कल ? हाम्लाई चैँ आन्दोलन गर्न उक्साउने, तपैँचैँ बाहुनलाई नै आप्mनो ठान्ने ? हात मिलाउने ? अँगालो मार्ने ? सालेहरुलाई त जिउँदै जलाउनु पर्ने, नोमा थिई ।’
‘सप्पै बाहुन शासक होइनन्, उनारु पनि हामीजस्तै शासित छ । उनार्ले पनि मुक्तिको लडाइँ लडेको छ । सप्पै पहिचानविरोधी छैन । सङ्घीयता विरोधी हैन । हामीले चिन्नुपर्छ ।’
‘यस्तै हो सर, पृथिवी–नारायणले रोपेको बीउ, जङ्गबहादुरले छादेका छादले तर्पैँहरुलाई पनि बाहुनवादी नै देख्ने बनाको छ, के गर्ने ? हाम्रै नेताहरुको पनि भरै छैन ?’
५) जातीय पहिचान ः
जातीय राज्यबारे भइरहेको गम्भीर बहसलाई यसले सघन रुपमा अभिव्यक्ति मात्र दिएको छैन, पहिचानका पक्षमा दृढ भएर खडा हुन प्रेरित पनि गरेको छ ।
भेना– ‘सप्पैलाई राज्य चाहियो रे । मलाई चैँ यसरी जातीय राज्य दिनु ठीक लाग्दैन । यल्ले विखण्डन गर्दैन र भाइ ?’
नाम्देङ– ‘गर्दैन भेना । बरू दिएन भनेचैँ यसै भन्न सकिन्न’, नाम्देङले सपाटमै जवाफ फर्कायो । भिनाजुलाई हे¥यो । भिनाजुको अनुहारमा उज्यालो आभा थिएन । बरू, एक किसिमको उदासी निर्लिप्त थियो । भन्यो नाम्देङले–
‘फेरि जातीय राज्य मागेका भनेर जसरी व्याख्या गरिँदै छ, त्यो पटक्कै होइन । आजसम्म उत्पीडित भएकाहरुले आप्mनो पहिचान मागेको हो । पहिचानलाई जातीय भनेर गलत कुरा गरिँदै छ ।’
‘पहिचानको अर्थ कसैलाई दमन गर्ने त होइन नि । बरू अखण्ड नेपालको नारा सुन्दा जति सुन्दर छ । यसले नेपाली जनताले यत्रो वर्ष परिवर्तनका लागि गरेको सङ्घर्षविरूद्ध आवाज उठाइरहेको छ । मुलुक ध्रुवीकरणमा त गकै छ । सङ्घीयताको सदियौँको सङ्घर्षविरूद्ध अखण्ड नेपाल नामको हतियार उठाको छ । मुलुक तिनको बाउको बिर्ता हो र ?
यसरी जातीय पहिचानसहितको सङ्घीय राज्यको पक्षमा आफ्नो वैचारिक दृष्टि प्रस्तुत गरी समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यलाई अंकन गर्नमा उपन्यासले सफलता प्राप्त गरेको छ ।
६) सन्त्रासपूर्ण परिवेश ः
जातीय राज्य र अखण्ड नेपालको पक्ष–विपक्षमा उर्लिरहेको आन्दोलनका कारण यसले कुन बेला कुन भयावह रुप लिने हो भन्ने शंका पैदा भइरहेको सन्त्रासपूर्ण स्थितिलाई पनि बडा जीवन्त चित्र उतारेको छ, उपन्यासले ।
‘अखण्ड नेपालको नारा लाउनेहरुले पो जुलुस निकालिहाल्छन् र भिडन्त पो भइहाल्छ कि ? कतिबेला पुलिसले हान्ने हो अश्रु ग्याँस ? कतिबेला कुन कुनाबाट छिर्छ भिजिलान्ते र कतिबेला भइहाल्छ झडप ? सोचिसक्नु थिएन । कल्पनाको पनि सीमा र हद थिएन कतै ।’
अर्को कुरा, केही सञ्चार–कर्मीद्वारा पेसागत मर्यादाविपरीत गई गरिएका गतिविधिहरुप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्ने क्रममा गैरजनजातिहरुप्रति लक्षित हुनसक्ने भिडन्तको स्थिति चित्रण गर्दै सारमा यसलाई संयमित तुल्याउनु आवश्यक रहेको धारणा पनि यसमा व्यक्त भएकै छ । एउटा नमुना हेरौँ–
‘मिडियाले पनि मानौँ कि मुलुक पूरै उनीहरुकै पेवा हो जस्तो गरेकै छन् । कहीँ–कतै नमीठो नलागेको अवश्य होइन । तर, थाम्नै छ । व्यवस्थित गर्नै छ आन्दोलनलाई । अराजक हुन दिनुछैन भीडलाई । चेन अफ कमान्डमा राख्नै छ । आँखाको मिलिकमा सबै तहसनहस हुनसक्छ । आन्दोलनको पक्षमै आएका बाहुन साथीहरु पनि क्षणमै निसाना बन्न सक्छन् । म हुँ भन्न पनि पाउने स्थिति छैन । के वास्ता आन्दोलनमा आगो भएर निस्केपछि ?’
७) कृषिकर्ममाथि अपार श्रद्धा ः
नेपालीहरुको मूल राष्ट्रिय पेसा भनेकै कृषि हो । आज केही व्यक्तिहरुको विचारलाई अपवादका रुपमा लिँदा हरेक नेपालीले कृषिकर्मलाई आप्mनो जीवनको पर्याय मानिरहेको तथ्य यसमा अभिव्यक्त हुन पुगेको छ । उपन्यासकार प्राकृत उत्पादनलाई यसरी उच्च मह¤व
धान इज्जत हो किसानको, धान गौरव हो किसानको, धान प्रतिष्ठा हो किसानको । यी सबैलाई गरागरामा झुलाउनुछ, फलाउनुछ मुरीका मुरी । आलीआली जिन्दगीलाई बचाउनुछ ।
८) आधुनिक प्रविधिबाट उत्पन्न विकृति ः
आधुनिक सञ्चार प्रविधिको दुरूपयोगबाट समाजमा व्यापक विसङ्गति पैदा भइरहेको अवस्था यद्यपि विद्यमान छ र यसले अझ उत्कर्षता पाइरहेको छ । अर्को कुरा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट आदिको दुरूपयोग हुँदा समाज विघटित हुँदै
छ । सम्बन्ध धाँजा फाटेको गराझैँ चिराचिरा पर्दै छन् र टुक्राटुक्रामा परिणत भएको सिसाझैँ बिखरिँदै छ पति–पत्नी र आफन्तहरुका पवित्र भावनाहरु । यस तथ्यलाई पनि यसमा सुन्दर अभिव्यक्ति यसरी दिइएको छ–
‘मोबाइलका सत्य या तथ्यहरु धेरै छन् । सुरूमा मिसकलको भारी आउँछ । पटकपटक मिसकल गरेपछि झपार्न मन लाग्छ । रिडायल ग¥यो, उठाउँदैन । गरिरह्यो । रिस मर्दै गएपछि मात्र उठाउँछ तर बोल्दैन । मनमा ‘को होला ?’ को भुइँचालो नै जान्छ । कम्पन लम्बिन्छ । मानौँ, थुप्रै थाम्ने घरहरु भत्कन्छन्, सुदूर गाउँका । सहरिया पक्की सिङ्गमरमरले चाहिँ थाम्ने कुन हविगत र । त्यसको पनि हाडखोर एकै ठाउँ हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरोचाहिँ घरबार नै नस्ट हुन्छ पलकमै ।’
९) धर्मान्तरणप्रति विमति ः
धनसम्पत्ति दिने, छोराछोरीलाई शिक्षा दिलाइदिने, उपचार गरिदिने, न्याय दिलाइदिने जस्ता प्रलोभन देखाएर इसाईहरुले हिन्दू, बौद्ध, किराँत आदि धर्मावलम्बीहरुलाई धर्मान्तरण गरी यत्ता न उत्ताको बनाइदिने प्रवृत्तिप्रति उपन्यासकारको गहिरो विमति देखिन्छ । उनको अन्य धर्म र दर्शनबारे ज्ञान राख्नु उचित हुने तर प्रलोभनमा परी वा पारी धर्मान्तरण गर्ने वा गराउने कार्य अनुचित रहेको दृष्टिकोण यसरी मुखरित हुनपुगेको छ–
‘पैसाको लोभ र लालचमा परेर धर्म परिवर्तन गर्नु राम्रो होइन, विचार र दर्शन बुभ्mनु चैँ राम्रो’
अर्को सन्दर्भमा उनी धर्मभीरूहरुले धर्मलाई ठगिखाने भाँडो मात्र बनाएको र सर्वसाधारणमा अन्धपरम्पराको खेती गरी उनीहरुमा लत र नशाको बानी पारी दिग्भ्रमित तुल्याइरहेको धारणा रहेको यसरी प्रस्तुत गर्दछन्–
‘संसारका सबै धर्महरुले अन्धविश्वास मात्तै अघि सार्छ । लत र नशा मात्तै भको छ धर्म । ठगिखाने मेलो मात्तै ।’
१०) राजधानीले गर्दै आएको विभेदको मार्मिक प्रस्तुति ः
काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कारले गाँज्दै लगेको राजधानीको विभेदपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहारलाई बडा घतलाग्दो पारामा चित्रण गरेका छन्, उपन्यासकारले । उनका दृष्टिमा राजधानी अर्थात् राज्य सत्ता साम्प्रदायिक छ । नातावाद र कृपावादको चंगुलमा फँसेको छ । ‘आफू र आप्mनो लागि मात्र’ को विकृत मनोदशाले विक्षिप्त छ र सामन्त र नवसामन्तहरुको पृष्ठपोषणमै केन्द्रित छ भन्ने सत्यतालाई यस प्रकार अभिव्यक्ति दिएका छन्–
‘तब न काठमाण्डु नातावाद र कृपावादले निलेको ।’
‘काठमाण्डु झनै साम्प्रदायिक छ । जातीय मुक्तिको अर्थ जातीय सम्मान र सहअस्तित्व हो भन्ने यसले बुभ्mदैन । न त बुभ्mन खोज्छ नै । बरू नाक खुम्च्याउँछ । अनुहार बिगार्छ र यस्ता कुराले विखण्डन ल्याउँछ भनेर रतुवाझैँ आफैँ तर्सन्छ । कुन्नि कतिन्जेलसम्म सुकिलामुकिलाको दिमागभरि ग्रस्त हुन्छ यो काठमाण्डु ?’
सहरी सभ्यता झन् रूग्ण, झन् विकृत र झन् भ्रमभित्र बाँचिरहेको तथ्यलाई पनि यसले अभिव्यक्ति दिएकै छ–
‘तिनैले छेल्छन् होला घामलाई । र त, काठमाण्डुमा कताबाट घाम झुल्किन्छ ? धेरैले ख्याल गर्दैनन् । र त, सत्य छैन कि काठमाण्डुमा ? भ्रमलाई नै सत्य ठान्नुपर्छ मान्छेले, भ्रमलाई नै चबाउँदै निल्नुपर्छ मान्छेले ।’
११) परिपूरक सम्बन्ध ः
नरनारीबीच सधैँ नै परिपूरक सम्बन्ध रहने तथ्यप्रति उपन्यासकार निकै सचेत देखा पर्दछन् । अझ पुरूषका निम्ति नारी सफलताका सेतु हुन् । उत्प्रेरक हुन् र जीवन आधार पनि । आप्mना दुःख र पीडालाई अरुसमक्ष भन्न नसकी गुम्स्याएर राख्ने र आफैँ जलेर भष्म–खरानी बन्ने तथ्यलाई पनि उनको उपन्यासले यस प्रकार जीवन्त चित्रण गरेको छ–
‘सबै पुरूषहरुको सफलताको पछाडि महिलाको हात हुन्छ’
‘आप्mनो मैले बुझेको छु माइली । लोग्नेमान्छै भनेको एस्तै हो । स्वास्नीमान्छेको साथ छैन त संसारै छैन । सधैँ नुन खाएको कुख्राजस्तो । बाटोमा हिन्दै छु कि भीरमा ? आगोले पोल्दै छ कि काँडाले घोच्दैछ ? अत्तोपत्तो हुँदैन । मनमा गाँठो परिरहन्छ । भन्न सकिने हैन । आफैँ जालो आफैँ खरानी भो । पीर बाँड्नु नसक्ने जात ।’
१२) सहिदको अवमूल्यनप्रति असन्तुष्टि ः
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि सहिदको सपनालाई कुल्ची सदा मिथ्याचारलाई बढवा दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । फलतः जनतामा छाउँदै गएको निराशा बोधप्रति उनी ज्यादै दुःखानुभूति
गर्दछन् । सहिदपर्व र दिवसहरु केवल क्षणिक भावुकता र देखावटी ढर्रा मात्र बन्दै गएको तथ्यप्रति उनी यसरी व्यङ्ग्य गर्दछन्–
‘लोकतन्त्र सहिद भको भन्छ । पोर देखेकै हौँ । तिरिक्क आँसु
झारो । मुठी उठायो । एक मिनिट शिर झुकायो । तेति त होला । तैस्पछि केई छैन ।’
१३) वैचारिकता ः
नेताले क्षणिक स्वार्थ र पदीय लोलुपतामा परी जनतासँग गरेका वाचा भुली देश र जनताका नाउँमा बेइमानी गरे पनि कार्यकर्ताले नगरेको बरू उच्च निष्ठाका साथ पालन गरिरहेको यथार्थ पनि उपन्यासको मुख्य चरित्र नाम्देङले चाकडी गरेरै भए पनि जागिर खान आमा र हाङ्दिमाले दिएको सल्लाहलाई अस्वीकार गर्दै व्यक्त गरेको यो विचारबाट पुष्टि हुन्छ–
‘मौका भनेर विचार पनि मार्नु भएन नि मैयाँ ।’
१४) संस्कृतिप्रति अपार मोह ः
हरेक जातिका जन्मेपछि गरिने, मृत्युपछि गरिने, बिहे र चाडपर्व मनाउने संस्कार पनि आ–आप्mनै शैली र परम्परा हुन्छन् भने तिनसँगै आ–आप्mनै संस्कृति पनि हुन्छन् । संस्कारचाहिँ आ–आप्mनै जातिले मात्र अपनाउने र तिनका संस्कृतिचाहिँ सबैको साझा सम्पत्तिका रुपमा रहने यथार्थता पनि यसमा यसरी प्रस्तुत हुन पुगेको छ–
‘संस्कार पो आप्mनो हुन्छ, संस्कृति त सप्पैको हुन्छ ।’
यस्तै परम्पराका रुपमा रहेका केही आदर्शहरु करिब विघटित हुने स्थितिमा पुगेको तथ्य पनि यसमा मुखरित हुन पुगेको छ । यहाँ भगवान् शिवका अनुचर मानिने जोगी सन्न्यासी जातिले राति फेरी लगाउने र बिहान सिद्धान्न लिएर जीविका चलाउँदै आएकोमा यसबाट जिउन नै मुस्किल रहेकाले यो पेसा छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका जोगीको कथनलाई प्रतिनिधिमूलक रुपमा यसरी प्रस्तुत गरिएको पनि छ–
‘बाउबाजेले गरिल्याउको काम भनेर मात्तै हो । घरघर चहारेर सिधा उठाइहिन्ने मन छैन हामीलाई पनि । यो नाथे सिधाले केई पनि लछार्दैन हाम्रो ।’
१५) आदर्शवादी राजनीतिक दृष्टिकोण ः
२००७ सालपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण पूर्वी पहाडी इलाकाहरुमा खकुरी दलबाट त्यस भेगमा बस्ने बाहुन–क्षेत्रीहरु प्रभावित भएको र तिनका लुटिएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति राज्यले भर्नुपर्ने आदर्शपूर्ण राजनीतिक सन्दर्भ प्रस्तुत गरिएको छ । अतिवादी चिन्तनका कारण ती लुटिएका र विस्थापित गरिएका मान्छेका पक्षमा बोलिदिने राजनीतिक इमानदारहरु रहेको यथार्थ पनि यसमा आएको छ । यसले कुनै पनि खाले अतिवाद र सङ्कीर्णतावादको घोर विरोध गरी सहअस्तित्व र सहपहिचानलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ–
‘ऐलेसम्म जिल्लामा जो–जति खस बाहुन लुटिए, तिनको क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ ।’
‘सत्यका लागि अजेय माक्र्सवाद जिन्दावाद, तर यान्त्रिक कठमुल्लावादी सोच हावी छ ।’
१६) भ्रष्टाचारप्रति घृणा ः
भ्रष्टाचारले संस्थागत रुपमा नै मान्यता पाउन थालेको तथ्य यस प्रतीकात्मक घटनाबाट अभिव्यञ्जना दिन खोजिएको छ–
‘के लाहुरेले चाहिँ ठगिनै
पर्ने ? के उनीहरुचाहिँ नागरिक होइनन्, यो मुलुकका ?’
१७) स्वैरकल्पना ः
यसमा स्वैरकल्पनाको पनि सुन्दर संयोजन गरी यथार्थको जीवन्त अभिव्यञ्जना दिने प्रयत्न गरिएका धेरै सन्दर्भहरुमध्ये यहाँ केही नमुना हेर्न सकिन्छ–
‘जोसँग दालमोट खाने पाँच रूप्पे हुँदैन, त्यसले जग्गा किन्ने ?’
‘कहाँ हुन्छ कल्पनाको सिमलभुवा ? कहाँ उछालिन्छ ज्वार नियतिको ? कहाँ तरङ्गित हुन्छन् मीठा, गुलिया छालहरु तृष्णाका ? कहाँ उठिहाल्छ विष्मय जस्तो
केवलता ? कहाँ अग्लिन्छ पर्वत र किन भीमकाय भइहाल्छ अतृप्तताको ? कहाँ फैलिन्छ सुगन्धित वासना जिन्दगीको ? कहाँ बज्छ सङ्गीत आत्मउद्देलनको ? कहाँ गाइन्छ मनोरम गीत हार्दिकताको ? कहाँ चुँडान्त भइहाल्छ तुरून्ते, कहाँ रेटिन्छ निरस भ्वाइलिन प्राप्तिको ? कहाँ रूचाउँछन् गाइने दाइले सारङ्गी अभाव या देह ?’
१८) शान्तिको चाहना ः
लामो युद्ध विभीषिकाबाट सन्त्रस्त बनेका नेपालीहरुको शान्तिपूर्ण रुपमा जिउँने चाहनालाई विभिन्न आन्दोलन र आतङ्कहरुबाट कुण्ठित तुल्याउन नहुने एवम् अब कुनै पनि तानाशाह नटिक्ने यथार्थ फरक प्रसङ्गमा नै भए पनि यसरी व्यक्त भएको छ–
‘हामी नेपाली जनता अब दिगो शान्ति चाहन्छौँ । लोकतान्त्रिक संविधान चाहन्छौँ । हिंसा होइन, युद्ध होइन, हड्ताल–आमहड्ताल होइन, शान्ति चाहन्छौँ । तानाशाह, बादशाह होइन, लोकतान्त्रिक शासन चाहन्छौँ । हामी बौद्धिकहरु, हामी शान्तिप्रेमीहरु, हामी लोकतन्त्रवादीहरु आएका छौँ सडकमा । बौद्धिकहरु सडकमा आएपछि कसैको केही जोड चल्दैन । हे प्रचण्ड, फिर्ता लिनोस् आमहड्ताल । हामी बोद्धिकहरुले चाह्यौँ भने नागार्जुनतिरकै यात्रा सुरू हुन्छ तपाईंको…’
१९) मिडियाबाट गरिने पक्षपातपूर्ण व्यवहार र तज्जन्य आक्रोश ः
जनजाति महासंघले गरेको आन्दोलनमा एकपक्षीय समाचार छापेको, कुनै विशेष समाचारलाई पनि उपेक्षा गरी छाप्दै नछापेको, सञ्चारकर्मी नै आन्दोलनकारीमाथि जाइलाग्न पुगेको आदि आरोप लगाउँदै मिडियाकै विरूद्धमा उत्रिएका जनजाति कार्यकर्ताहरुका तत्कालीन यथार्थ अभिव्यक्ति पनि जीवन्त रुपमा यसरी मुखरित हुन पुगेको छ–
‘मूलाहरुले हाम्रो पूरै आन्दोलनलाई चैँ विरोध गर्ने । मञ्चमा गएर आप्mनो कुरा राख्दै गरेको वक्तालाई हातपात नै गर्न खोज्ने पत्रकारको बारेचैँ एक शब्द नबोल्ने ? पत्रकार महासङ्घचैँ के हो ? किन त्योबारे बोल्दैन ? पत्रकारको काम समाचार लेख्ने कि लडाइँ गर्ने हो ? यसको त कडा प्रतिकार गर्नैपर्छ ।’
२०) पारिवारिक जीवन–दर्शन ः
रम्भासँगको पारिवारिक जीवन विघटित भएपछि लामो कालखण्डपश्चात् फेसबुक सञ्जालमा पुनः भेट भएपछि आफूले विगतमा गरेका कार्यकलापबारे पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा नाम्देङको माध्यमबाट उपन्यासकार जीवनमूल्यलाई रोचक ढङ्गमा टिप्पणी यसरी प्रस्तुत गर्दछन्–
‘जिन्दगीलाई त्यहीँ टाइप गर्नु थिएछ, गरिएन । त्यही पानामा लेख्नु थिएछ, लेखिएन । बनाउनु थिएछ, फाइल फोल्डर सेभ गर्नु थिएछ । डी ड्राइभमा राख्नु थिएछ, राखिएन । अहँ, केही गरिएन । सबै कथाहरु डेस्कटपमा थिए । फरम्याट भएछ जिन्दगीकै कम्प्युटर । हार्डडिक्स सबै खाइदिएछ भाइरसले । डिलेट भएछ सम्बन्ध नामको म्याटर ।’
जीवन–रथ पतिपत्नी दुवैको सहकार्य र सहअस्तित्वबाट जीवन्त बन्दछ । दुवै एकाकी पारामा चल्न थाले सम्बन्धमा पूर्णतः दरार पैदा हुन्छ । पति नाम्देङले पत्नीको इच्छा र चाहनाविपरीत गई आप्mनै पाराले चल्न खोज्दा पत्नी उसबाट टाढाटाढा हुँदै गई र अन्ततः सम्बन्ध नै ध्वस्त हुनपुग्छ भन्ने जीवन–जगत्मा हुने यस्ता परिघटनाको शाश्वत् सत्यलाई प्रतीकात्मक रुपमा रम्भाको मुखबाट यसरी प्रस्तुत गरिएको छ–
‘एउटी आइमाईको लागि लोग्ने के हो ? किन हो ? तिमीले कहिल्यै बुभ्mने कोशिस गरेनौ । मेरो भित्री इच्छा के छ भन्ने तिमीले कहिल्यै सोचेनौ । खालि नाटक मात्रै सोच्यौ । तिमीले आफ्नै जीवनलाई पनि नाटक नै बनायौ । तिमी स्वास्नीको सवालमा केही पनि नबुभ्mने मान्छे हौ ।’
२१) साइबर संस्कृति ः
आदिम कालीन सञ्चार र आधुनिकोत्तर युगमा विकसित सञ्चारका बीचमा पनि तुलना गरिएको छ । फेसबुक, इमेल आदि सामाजिक सञ्जालको विशेषता र महत्ता र यसको प्रभावबारे प्रकाश पारी साइबर संस्कृति उन्मुख नेपाली समाजको सुन्दर झाँकी यसरी उतारिएको पनि छ–
‘सामाजिक सञ्जाल पहिलेपहिले बाँसमा लेखिन्थ्यो प्रेमको सन्देश । ढुङ्गामा कोरिन्थ्यो मायाको भाका । अहिले फेसबुकको भित्तोमा लेखिन्छ मनको वह । के फरक छ र ? फेसबुक भनेको पनि भीर नै त रहेछ, अजङ्गको समयले बदलेर प्रविधि नामको भित्तो बनाइदिएको । जहाँ अनन्त कुण्ठाहरु, सपनाहरु, मह¤वाकाङ्क्षाहरु, दम्भहरु पोस्ट हुँदा रहेछन् । शेयर हुँदा रहेछन् र मान्छेचाहिँ लडिमर्दो रहेछ भीरबाट ।’
२२) इतिहासको संस्मरण ः
उपन्यासकारले अतीतमा राजनीतिक विवादमा परेका राजनेताहरुको स्मरण गरेका छन् । ऐतिहासिक कालखण्डमा राज्य गर्ने सन्दर्भमा तानाशाही प्रवृत्ति प्रस्तुत गर्नेहरुको स्मरण गर्ने क्रममा उनले श्रीलङ्काली तमिल नेता प्रभाकरण र उनको मृत्युको पनि ससम्मान स्मरण गरेका छन् ।
‘नाम्देङ त्यतिकै विक्षिप्त भयो । मानसपटलले कुनै काम गर्न सकेन । हिटलर मारिए । नेपोलियन मारिए । अथवा थुप्रै बादशाह तानाशाहहरु मारिए । सद्दाम मारिए । प्रभाकरण मारिए । इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरहरु बुनिँदै थिए कि थिएनन् ? हारेर पनि जित्नेहरुकै लगाम हो कि ? खै किन हो ? नाम्देङलाई प्रभाकरणप्रति एक किसिमको सम्मान पो जाग्यो ।’
यस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास ‘दमिनी भीर’ मा सामाजिक विसङ्गति र विद्रोही चेतना मूल स्वर बनेर आएका छन् । जातीय पहिचानको मुद्दा पनि यसमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत छ । राजनीतिक आरोह–अवरोह र आन्दोलनको शिथिलताका कारण उत्पन्न निराशावादी जीवनदृष्टि पनि यसमा मुखरित हुन पुगेको छ । समतामुखी समावेशी चिन्तनको अभिव्यञ्जना पनि पाइन्छ नै । राज्यसँग गरिएका माग र त्यसको परिपूर्तिका लागि गरिएका विभिन्न खाले आन्दोलनले सामाजिक सद्भाव बिथोलिने भय पैदा हुँदा उत्पन्न सन्त्रासपूर्ण परिवेश पनि प्रस्तुत छ । ग्रामीण समाजमा विद्यमान सद्भाव र सहयोगी भावना पनि यसमा अभिव्यक्त भएकै छ । कृषिकर्ममाथि अपार श्रद्धा र ग्रामीण क्षेत्रमा विकसित सडक, सहर अनि विकसित चेतना पनि यसमा व्यक्त भएकै छ । आधुनिक प्रविधिबाट उत्पन्न विकृति, धर्मान्तरणप्रति विमति, राजधानीले गर्दै आएको विभेद तथा सहिदको अवमूल्यनप्रति विमति प्रकट गरेको छ । यस्तै, उपन्यासले साइबर संस्कृतिको उपयोग गरी यसको प्रभाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । मिडियाबाट गरिने पक्षपातपूर्ण व्यवहार र तज्जन्य आक्रोश पनि जीवन्त रुपमा यहाँ अभिव्यक्त भएको छ । यसले भ्रष्टाचारप्रति घृणा र इतिहासप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्र्दै सार्वजनीन सत्य र युद्ध साहित्यका कतिपय बिम्बहरु पनि यसमा प्रस्तुत भएका छन् । मूलतः सामाजिक जीवन–दर्शन तथा तत्कालीन राजनीतिक यथार्थताको अभिव्यक्ति नै यस उपन्यास कृतिको मूल प्राप्ति रहेको छ ।